Best Webforum ilaa 2004
more ...Farriimaha gaarka loo leeyahay iyo sheekaysiga tooska ah
Afeef iyo sumad
Ka warbixinta waxyaabaha sharci darada ah ee kulamada: abuse@schagerer.com
Fadlan sheeg xigashooyinka oo qiil u yeelo dariiqa layman sida waafaqsan ÖStGB §.
1. Masuuliyadda waxyaabaha ka kooban boggan internetka
Waxaan si joogto ah u horumarinaynaa waxyaabaha ka kooban websaydhka waxaanan ku dadaalnaa inaan bixinno macluumaad sax ah oo cusub. Nasiib darrose, uma qaadan karno wax mas'uuliyad ah oo ku saabsan saxitaanka dhammaan waxyaabaha ku jira boggan internetka, gaar ahaan kuwa ay bixiyeen dhinacyadu saddexaad. Waxyaalaha ku jira golayaasha la keydiyay iyo bogagga kaydinta ee milkiilaha madasha iyo mas'uulku mas'uul kama ahan, tan waxay bixineysaa oo keliya aaladda farsamada ee la heli karo waxaana mas'uul ka ah sida waafaqsan §16 ECG oo ah bixiye martigaliye ah oo aan ka aheyn xubnaheeda iyo howlahooda. Haddii aad ku aragto wax dhibaato ah ama wax sharci darro ah, fadlan nala soo xiriir isla markaaba, waxaad ka heli doontaa faahfaahinta xiriirka meesha ku taal sumadda.
2. Masuuliyada iskuxirka websaydhkan
Websaydhkeenna waxaa ku jira xiriiriyeyaal websaydhyo kale oo aanan mas'uul ka ahayn waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Masuuliyadaha websaydhyada isku xidhan annaga nooguma jirin sida ku xusan EC 17 ECG, maxaa yeelay aqoon uma lihin dhaqdhaqaaqyada sharci darada ah mana aannan ogaan sharci-darrada noocaas ah waxaanan isla markiiba meesha ka saari doonnaa xiriirrada haddii aan ka warqabo wax sharci-darro ah. Haddii aad ku aragto xiriirin sharci darro ah boggayaga internetka, fadlan nala soo xiriir, waxaad ka heli doontaa faahfaahinta xiriirka meesha ku taal sumadda.
3. Kaydinta xogta otomatiga ah
Markaad booqato websaydhyada maanta, macluumaadka qaarkood ayaa si otomaatig ah loo abuuri doonaa oo loo kaydiyaa, oo ay ku jiraan websaydhkan. Haddii aad booqato websaydhka sida uu hadda yahay, server-keenayaga (kumbuyuutarka uu ku keydsan yahay websaydhkan) wuxuu si otomaatig ah u keydiyaa xogta sida cinwaanka (URL) bogga aad raadineyso, biraawsarka iyo nooca biraawsarka, nidaamka hawlgalka loo adeegsaday, cinwaanka (URL) ee boggii hore loo booqday. Bogga (tixraaca URL), magaca martida loo yahay iyo cinwaanka IP-ga ee aaladaha laga heli karo, iyo taariikhda iyo waqtiga faylasha (faylalka websaydhada shabakadda). Sida caadiga ah, faylalka websaydhada faylasha ayaa ku kaydsan laba toddobaad ka dibna si otomaatig ah ayaa loo tirtiraa. Ma kashifinno macluumaadkan, laakiin meesha kama saari karno in lagu arki doono haddii ay dhacdo anshax xumo. Aasaaska sharciga ah, sida ku xusan qodobka 6aad faqradiisa 1aad ee DSGVO (sharci ahaanta howsha), ayaa ah in ay jirto dan sharci ah oo suurtagelineysa hawlgallada bilaa khaladka ah ee websaydhkan iyaga oo qabanaya faylasha faylasha websaydhada.
4. Kaydinta xogta shaqsiyeed
Xogta shaqsiyeed ee aad si elektaroonig ah noogu soo gudbiso websaydhkan, sida magaca, cinwaanka e-maylka, cinwaanka ama macluumaadka kale ee shakhsi ahaaneed ee ku saabsan gudbinta foom ama faallooyin, annaga ayaa nala wadaagi doona waqtiga iyo cinwaanka IP-ga. loo adeegsaday ujeedo cayiman, la ilaaliyay oo aan loo shaacin qaybaha saddexaad. Kaliya waxaan u isticmaalnaa xogtaada shakhsiyeed si aan ula xiriireyno booqdeyaasha si cad u codsada xiriir iyo howsha howlaha iyo badeecooyinka lagu bixiyo websaydhkan. Bixin mayno macluumaadkaaga shaqsi ogolaansho la'aan, laakiin meesha kama saari karno in lagu arki doono haddii ay dhacdo anshax xumo. Haddii aad noo soo dirto macluumaad shakhsi ah e-mayl, ka fogow websaydhkan, ma dammaanad qaadi karno gudbinta amaan ah iyo ilaalinta macluumaadkaaga. Waxaan kugula talineynaa inaadan waligaa xog sir ah ku dirin emaylka. Aasaaska sharciga ah ee ku xusan qodobka 6 (1a) ee GDPR (sharci ahaanshaha wax ka qabashada) waa inaad na siiso ogolaanshaha la socodsiinta xogta aad galiso. Waad la noqon kartaa ogolaanshahan wakhti kasta, e-mayl aan rasmi ahayn ayaa ku filan, waxaad ka heli doontaa faahfaahinta xiriirkeena ku yaal sumadda.
5. Xuquuqda sida ku xusan Xeerka Ilaalinta Xogta Guud
Sida ku xusan qodobada GDPR iyo Sharciga Ilaalinta Xogta ee Austrian (DSG), waxay leeyihiin xuquuqaha soo socda ee mabda'a: Xuquuqda sixitaanka (Qodobka 16 GDPR), xuquuqda in la tirtiro (Qodobka 17 GDPR), xuquuqda xaddidaadda howshaada (Maqaalka) 18 DSGVO), xuquuqda in la ogeysiiyo, waajibaadka ogeysiinta ee la xiriira sixitaanka ama tirtirka macluumaadka shaqsiyeed ama xaddidaadda howsha (Qodobka 19 GDPR), xuquuqda xaq u lahaanshaha xogta (Qodobka 20 GDPR), xuquuqda diidmo (Qodobka 21 GDPR), xaq, ma ahan mid gaar ah. in lagu soo rogo go'aan ku saleysan habka otomatiga u shaqeeya, oo ay kujirto sumcadda, (Qodobka 22 GDPR). Haddii aad aamminsan tahay in howshaada macluumaadkaaga ay ku xad-gudbeyso sharciga ilaalinta macluumaadka ama haddii kale sheegashadaada xog-dhowrka lagu xadgudbay hab, waxaad u caban kartaa mas'uulka kormeeraha, kaas oo Awstria ka jira hay'adda ilaalinta macluumaadka.
Websaydhkeenna waxay adeegsataa cookies-ka HTTP si loogu keydiyo xogta isticmaale-gaarka ah. Cookie waa baakad macluumaad gaagaaban oo ay isweydaarsadaan biraawsarka shabakada iyo adeegaha shabakada, laakiin gabi ahaanba wax macno ah uma leh arjiga websaydhada oo kaliya adeegsiga shabakada, tusaale ahaan. Gole ahaan, macne ahaan, tusaale ahaan, adigoo si ku meel gaadh ah u keydinaya xogta kalfadhiga akoontada isticmaalaha ee aad gasho kulanka. Waxaa jira laba nooc oo cookies ah: cookie-ka qaybta koowaad waxaa sameeya websaydhkeenna, iyo cookies-ka saddexaad-saddexaad waxaa abuuray degello kale (tusaale ahaan Cloudflare). Kala soocid dheeri ah ayaa laga sameeyay inta udhaxeysa sedexda qaybood ee cookies, kala soociddan ayaa salka ku haysa baahida loo qabo in la isticmaalo: buskudyada muhiimka ah si loo hubiyo howlaha aasaasiga ah ee websaydhka, cookies-ka shaqeynaya si loo hubiyo waxqabadka bogga iyo cookies-ka la bartilmaameedsanayo si loo wanaajiyo khibradaha isticmaalaha. Kukiyadaheena qaybta koowaad waa farsamo ahaan loo baahan yahay si loo hubiyo shaqeynta adeegyada mana hayaan wax macluumaad shaqsiyeed ah sida cinwaankaaga IP-ga ama cinwaanka e-maylkaaga. Sidaa darteed buskuddeenayada ayaa hoos imanaya marka laga reebo Act 96 Sharciga Isgaarsiinta (TKG), maadaama adeeggu uusan mar dambe u shaqeyn doonin dhammaan isticmaaleyaasha markii cookies aan naafo ahayn. Oggolaanshaha macnaha TKG sidaas darteed looma baahna. Gaar ahaan, kuwanu waa soosaarayaasha xisbiga koowaad ee soosocda: * _data, * _t, * _sid oo ikhtiyaar u ah xt_ddos_key, xt_fboff iyo xt_banman sida cookies-ka kalfadhiga si loo galo iyo xogta kalfadhiga, xt_cdn, xt_dir iyo xt_diirad si ay kuugu wareejiso inaad kuhesho Cloudflare , sidoo kale xt_cookiecheck si uu kaaga warqabo warqad ku xigta maaskaro geliyaha, haddii aad curyaamisay cookies-ka habka degsan biraawsarkaaga. Kuki saddexaad ee __cfduid waa cookie farsamo ahaan lagama maarmaan u ah Cloudflare. Waxaan u adeegsanaa adeegyada Cloudflare si aan uga ilaalinno adeegyadeena weerarrada DDoS, haddii kale helitaankooda lama dammaanad qaadi karo. Kukiyada ayaa ku keydsan aaladdaada ilaa waqtigooda ansax uu dhacayo ama ilaa aad tirtirto, taasi waxay dhici kartaa iyadoo kuxiran meeleeyaha biraawsarkaaga. Haddii aadan guud ahaan noo oggolaanin inaan isticmaalno buskud, i. ku meelee kuwa moodeelka biraawsarka, shaqooyinka qaarkood iyo bogaggu uma shaqeyn karaan sidii la filaayay.
7. Codsiga Shuruudaha isticmaalka